Dhaawacyadii Qaraxii 14 Oktoobar ee Kenya la keenay oo dib ugu laabtay Muqdisho – idalenews.com
Dhaawacyadii Qaraxii 14 Oktoobar ee Kenya la keenay oo dib ugu laabtay Muqdisho
Subaxnimadii Axadda ee ay bisha Janaayo ahayd 21, 2018, waxaa magaallada Muqdisho ku laabtay ayaga oo bed-qaba toddobo qof oo ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxii 14-kii Oktoobar ka dhacay magaallada Muqdisho oo ay dalkeeda ku daawaysay dowladda Kenya.
Dadkaan ayaa qabay dhaawacyo qaarkood halis yihiin, waxa ay dhowr bilood ku jireen Isbitaalka Kenyatta ee magaallada Nairobi oo loogu fidiyay daryeel caafimaad. Dhammaantood waxa ay laabteen ayaga oo caafimaadkoodu wanaagsan yahay.
Sii-hayaha Safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya mudane Cali Maxamed Sheekh Bagadi ayaa yiri “Aad ayaan ugu faraxsan nahay in ay dalkooda ku laabtaan ayagoo caafimaad qaba. Waxaa u mahad celinaynaa dowladda Kenya oo daryeel caafimaad u fidisay bukaannadaan oo la keenay halkaan ayaga oo qaarkood ku jiraan xaalad halis ah”.
Dhaawacyo kala duwan ayay qabeen bukaannadaani, mid ka mid ah ayaa labada lugood ka go’ay, daawayn kaddib waxaa loo galiyay lugo macmal ah oo uu ku socon karo. Bukaan kale oo dhabarka ka dhaawacmay waxaa loo sammeeyay qalliin, waxa uuna laabtay isaga oo wanaagsan.
“Adeegyada la siiyay iyo natiijada daryeelku waa mid lagu farxo, ehellada bukaannada iyo dowladda Soomaaliyaba aad ayay ugu faraxsan yihiin xaaladdooda” ayuu sii raaciyay.
Dowladda Soomaaliya ayaa saaxibbadeeda caalamka iyo gobolkaba la kaasahtay daawaynta boqollaalkii qof ee ku waxyeeloobay weerarkii argagixiso ee ay kooxda Al-Shabaab ka fulisay Muqdisho 14-kii Oktoobar ee sanadkii hore. Dowladda Kenya oo ka mid ahayd dowladihii soo gurmaday ayaa 7 qof oo dhaawac ah iyo 7 kale oo la socotay u soo qaadday dalkeeda si ay ugu daawayso. Saddex bil kaddib ayay dalkooda dib ugu laabteen ayaga oo caafimaad qaba.
Dhageyso:-Xildhibaano Gudbinaya Dacwad Ka Dhan Ah Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan
Dhageyso:-Madaxweyne Farmaajo Oo Maanta Dhagax Dhigaya Xarumo Muhiim Ah Kuna Wajahan Hobyo